Cunto: Sidee looga saari karaa Spam gudbinta? Talooyin sahlan
Gawaarida gudbinta spam waxay noqotey kulan maalin kasta ah oo loogu talagalay dadka badankooda internetka. Ka takhalusidda noocyadan gaadiidka ah ayaa lagama maarmaan u ah mulkiilaha mareegta ama shirkadda wakaaladda SEO. Qalabka Google Analytics wuxuu leeyahay siyaabo badan oo looga saari karo spam gudbinta gudbinta warbixinta gudbinta GA - logiciel de paie algerie excel. Gawaarida Spam waxay ahayd fikrad qadiimi ah oo ah koofiyad madow farsamooyinka raadinta farsamada. Shakhsiyaadka waxay u isticmaali lahaayeen habkan si ay u been ugu sheegaan macaamiishooda iyagoo samaynaya boggooda internetka si degdeg ah. Waxaa intaa dheer, waxay taasi keeni kartaa saamayn xun, adoo sababaya khasaare weyn macaamiishooda aan shaki gelin. Fahamka spam gudbinta waa lagama maarmaanka u ah qof kasta oo ka shaqeeya e-ganacsiga.
Nik Chaykovskiy, Maareeyaha Guusha Guud ee Macaamiisha Sartaal , ayaa halkan ku soo koobaya arrimo dhowr ah oo ku saabsan arrintan.
Fahmitaanka gaadiidka gudbinta
Gawaarida gudbinta waa kuwa martida ah oo riixaya isku xirka bogaggaaga bogagga kale. Marka bogagga shabakadda ku xirto goobtaada, waxaa jira xiriir toos ah oo toos ah, taas oo horseedi karta socodka joogtada ah ee martida. Tusaale ahaan, mid ayaa riixi kara isku-xiraha boggagaaga internetka sida domain sida National Geographic's Website. Macluumaadkaaga domain waxay noqon laheyd goobta Nat Geo ee sababtoo ah waxaad noqotay garsoore Nat Geo.
Spam u gudbinta waa taraafikada ka imaanaya domains kuwaas oo laga yaabo inay ama xiriir la yeelanayaan website-kaaga. Qaar ka mid ah xeeladaha ayaa laga yaabaa inay ku lug yeeshaan booqashooyinka sharciga ah ee dhabta ah ee dadka dhabta ah. Xaaladaha kale, spam u gudbinta wuxuu isku dayaa inuu ku xakameeyo lambarkaaga GA code-kaaga si uu u qoro booqashada bogga kaas oo been ah..Labada xaaladoodba, GA-gaagu wuxuu tiriyaa booqashooyinka bogga kaas oo laga yaabo inay noqoto mid ka tarjumeysa qayb ka mid ah martidaada. Xaalado badan, spam u gudbinta waxay u dhici kartaa inay u gudbaan jihooyinka geedka ama xitaa kuwa gudbinta:
Tixraacyada cagaarshow: Waxay badanaaba kufilan yihiin. Gaadiidka oo ka soo jeeda qoryaha haddii aan sharci ahayn. Waxay u yimaadaan website-kaaga inta lagu jiro kalfadhiyada sharci-galka ah
Xawilaadaha Ghost: Kuwani ma booqanayso website-kaaga. Si kastaba ha ahaatee, waxay ku maareynayaan in ay khiyaameeyaan Google Analytics si aad u diiwaan geliso booqasho been abuur ah.
Webmaster kasta wuxuu ubaahan yahay qalab lagama maarmaan u ah inuu wax ka qabato gaadiidka aan ka iman macaamiisha dhabta ah. Tusaale ahaan, qaar ka mid ah qalabyada webmasters ay isticmaalaan si ay u qabtaan adeegyo dib-u-qabasho waxay dadka ka caawin karaan in ay soo qaadaan spam gudbinta. Tusaale ahaan, waxaad ku kicin kartaa qaar ka mid ah kuwaan kuwan oo ku jira habka loo yaqaan 'admin settings'
Guddi tababbar, waxaad awood u yeelan kartaa inaad hawlgeliso adeegga shaandhaynta bot. Waxaa jira xogta spam iyo sidoo kale caarada kuwaas oo u muuqda in ay ku raadinayaan website ah sababo kala duwan. Abuurista filtarrada khaaska ah waxay kaa caawin karaan in aad iska ilaaliso qaar ka mid ah ilahooga tareenada kuwaas oo aan si sharci ah u shaqayn karin. Meelaha qaarkood sida Semt waxay leeyihiin taariikh taariikhda ah ee tuuraya weerarada spam.
Waa lagama maarmaan in la isticmaalo bixiyaha emailka kaas oo amaanaya bixiyeyaasha e-mailka ah inay ku xadidaan taraafikada gudbinta ee ka yimaada boggaga internetka. Waxay ka dhigan karaan dhamaan kulannada safarka iyo sidoo kale ilaalinta macaamiishaada weerarrada suurtagalka ah ee suurto galka ah
Spam Referrer waa dhibaato weyn oo soo wajahday inta badan dadka isticmaala internetka. Qaar ka mid ah hay'adaha SEO kumbuyuutarka SEO waxay u muuqdaan inay adeegsadaan xeeladaha spam references si ay u bixiyaan natiijooyinka degdeg ah. Gawaaridanu ma laha asaas u-helitaankiisa. Waad la kulmi kartaa rigoore markaad isku daydo inaad ku daro isticmaalka adeegga isbaarada. Tilmaamahan wuxuu kaa caawin karaa inaad ka fogaato gaadiidka gudbinta.